Tag: ọcha akwụkwọ | Martech Zone
Tag: ọcha akwụkwọ
Usoro ahia kachasị elu maka ọgbọ na-eduga
Tọzdee, Machị 20, 2014 Wenezdee, Machị 19, 2014 Douglas Karr
Anyị metụrụ isi na onye ahịa ochie taa aka nke na-arụghị ọrụ na anyị n'afọ gara aga. Otu afọ gara aga, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji akụ anyị n'ihi na anyị nọ n'ihu usoro atụmatụ njikarịcha ọchụchọ. Ugbu a, ekwenyere m na anyị na-akwali ndị ahịa anyị ịga n'ihu n'okporo ụzọ iji nweta azum ọdịnaya yana ahịa akpaaka. Ọ na-efeli elu, anyị nọ n’ụzọ ziri ezi. Dabere na Oracle Eloqua, teknụzụ, ịre ahịa email, ọsọ na ọdịnaya bara ụba bụ